Soo dejisan OpenOffice 4.1.8 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: OpenOffice
OpenOffice – mid ka mid ah baakadaha software taasoo keentay in la noocyada kala duwan ee waraaqaha shaqeeyaan. software The u saamaxaaya in ay xaalkaa qoraalka, abuurin barasantigareeyaan iyo bandhigyo, la sawiro iyo images dulinka, nidaamka database-ka, iwm OpenOffice jaanqaadi badi qaababka ugu muhiimsan, oo ay ku jiraan ay format ODF u gaar ah iyo qaabab Office Microsoft shaqeeyaan. Sidoo kale software ah ayaa ka shaqeynayaan hodanka iyo kala duwan oo ka mid ah goobaha dabacsan. OpenOffice leeyahay interface sahlan loo isticmaali karo oo dareen leh.
set A qoraalka awood badan iyo tafatirayaasha graphic
Dhoofinta dukumentiyada qaab PDF
Dhignaashada la qaabab ah baakadaha kale xafiiska
kala duwan ee goobaha dabacsan
Soo dejisan OpenOffice
Faallo ku saabsan OpenOffice
OpenOffice Xirfadaha la xiriira
Microsoft Office Word Viewer – waa aalad ku habboon in lagu daawado, lagu duubo oo lagu daabaco dukumiintiyada qaab ama docx ah. Software-ka ayaa shaqeynaya isagoon rakibin Microsoft Word.
fudud ayaa si ay u isticmaalaan software la set badan oo ah qalab iyo taageero ah qaabab file caan ah si ay u xalliyaan hawlaha kala duwan ee xafiiska.
Microsoft Office Excel Viewer – softiweer ay ku shaqeeyaan, ku daawadaan oo ku daabacaan waraaqaha waraaqaha elektiroonigga ah ee qaabka Excel. Softiweerku wuxuu awood u siinayaa inuu ku arko dukumiintiyada qaabab kala duwan una beddelo faahfaahinta bog.
Tani waa mid ka mid ah kuwa ugu sahlan PDF-ka ee taageera hawlaha caadiga ah iyo qalabka sahlan ee loo marayo bogagga PDF.
LibreOffice – mid ka mid ah tusaalooyinka hormuudka ah iyo bilaashka ah ee Xafiiska Microsoft. Software-ka wuxuu taageeraa qaababka ugu caansan si loo gaaro is waafajinta ugu sarreeysa ee leh barnaamijyada kale ee xafiiska.
software The si aad u nadiifiso diiwaanka nidaamka ka mid ah qashinka faylka. software The ogaadaa codsiyada jiritaan la’aanta on drive adag oo kuu ogolaanaya in aad ka saar furaha ka diiwaanka.
Tool u fariimaha deg dega ah ee internet-ka. Software waxay leedahay hawlaha waxtar leh oo u ogolaanaya isgaadhsiinta ammaan la isticmaala.